अनुहार लागि ग्लिसेरिन र भिटामिन ई: सुंदरता र तरुण छाला को हेरविचार
तपाईं आफ्नो सौन्दर्य हेरचाह भने, तपाईं पक्कै ग्लिसेरिन र भिटामिन ई अंकित छन् भनेर लाभ बारेमा जान्न आवश्यक छ। यी पदार्थ अत्यावश्यक छाला छन्। तिनीहरूले तपाईं आफ्नो युवा लम्ब्याउनु गर्न र धेरै समस्या को छुटकारा सक्षम हुने अनुपम गुण, धन्यवाद छ।
रहस्य के हो?
एक व्यक्ति लागि ग्लिसेरिन र भिटामिन ई र दैनिक प्रयोग गर्नुपर्छ सकेन। Tocopherol (भिटामिन ई) छाला स्वास्थ्य र रोकन उमेर-सम्बन्धित परिवर्तनहरू दिन्छ जो एंटीओक्सिडेंट भिटामिन, बीच पहिलो हो। यो पदार्थ प्रेरित रूपमा निम्नानुसार: यो तल कक्षहरू मा ओक्सीकरण प्रक्रियाहरु, आहार सुधार, slows यूवी रेज विरुद्ध सुरक्षा। भिटामिन ई धेरै कस्मेटिक उत्पादनहरु मा मुख्य घटक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यसलाई निम्न गुण छ:
तल वृद्ध Slows।
यो एस्ट्रोजन को उत्पादन को बढावा।
यसलाई सामान्य पानी-लिपिड ब्यालेन्स समर्थन गर्दछ।
मुखासे व्यवहार गर्नुहुन्छ।
freckles, blemishes, खंड चिह्न, सानो scars समाप्त।
यसलाई भिटामिन ए को अवशोषण बढावा
भिटामिन ई orally सकिन्छ। यसलाई कुनै पनि फार्मेसी मा दानाको फारम बिक्रि छ। दैनिक खुराक 15 मिलीग्राम छ। अनुहार लागि ग्लिसेरिन र भिटामिन ई छाला मा rubbed गर्न सकिन्छ। यो उद्देश्य लागि दुई तरल बराबर अनुपात मा मिश्रित र सुत्नेसमय अघि लागू छन्। को संरचना चाँडै पर्याप्त अवशोषित हुन्छ, तर परिणाम कुर्न लामो छैन। ठीक झुर्रियाँ गायब र छाला धेरै चिल्लो, चिल्लो र मखमली हुनेछ।
ग्लिसेरिन अनुहार छाला: प्रयोग र अनुप्रयोग सुविधाहरू
तरल ग्लिसेरिन एक अमूल्य सुविधा छ - यो चिस्यान कायम रहन्छ। भन्यो कुनै पनि फार्मेसी मा बिक्री को लागि हो। Glycerol क्रीम, मास्क र अन्य कस्मेटिक उत्पादनहरु थपिएको छ। यो छाला एक मइस्चराइजिंग फिलिम, छाला किन सुरुमा टाँसिएको हुन सक्छ जो मा सिर्जना गर्छ। फिल्म चाँडै गायब हुनेछ देखि, यो चिन्ता छैन।
तेल छाला को लागि शुद्ध Glycerol मा लागू हुन सक्छ - एक लोशन रूपमा। पदार्थ सुधार सेल पुनर्जनन को नियमित प्रयोग संग, सुनिंनु सबै एकदम छिटो हो। साथै, छाला राम्रो moisturized छ।
यो ग्लिसेरिन संग अनुहार लागि मास्क सबै प्रकार को छाला को लागि धेरै उपयोगी छ भन्ने उल्लेख गर्नुपर्छ। बराबर भागहरु मा Glycerol र मह: एक विश्वव्यापी उपकरण निम्न संरचना सल्लाह गर्न सक्छन् रूपमा। मुखौटा धेरै तरल बाहिर बारी हुनेछ। यो मोटा, थप्न बनाउन दलिया। तपाईं सुख्खा छाला छ भने, आवश्यक तेल को केही घटेको थप्नुहोस्। साथै, तेल छाला लागि Glycerol, जई आटा र ककडी रस को एक मास्क प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ। संवेदनशील छाला विशेष हेरविचार आवश्यक छ। यसलाई सिट्रस तेल को वाहेक संग Glycerol र अण्डाको पहेंलो भाग एक मास्क प्रदान गर्न सम्भव छ।
ग्लिसेरिन र भिटामिन ई: अंकित र हात राम्रो माध्यम कुनै!
यी पदार्थ क्रीम प्रयोग गरिन्छ, व्यक्तिहरूलाई लागि मात्र होइन तर पनि हात लागि डिजाइन। हाम्रो शरीर को यो भाग निरन्तर पर्यावरण प्रभाव, पानी, घरेलू रसायन उजागर गरिएको छ। क्रीम बाहेक दाह राहत गर्न, तपाईं मास्क को एक किसिम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि कुनै समय वा तिनीहरूको तयारी लागि इच्छा आफ्नो सामान्य क्रीम मा ग्लिसेरिन र भिटामिन ई को केही घटेको थप्न पर्याप्त छ। दिन को समयमा तिनीहरूलाई हात चिल्लो र धेरै तपाईँले छाला नरम र कोमल भयो याद हुनेछ।
"Gestrenol" (बिरालोहरु लागि खस्छ): प्रयोगको लागि निर्देशन वास्तविक
दबाइ "Cortexin" को लागि बच्चाहरु: प्रयोगको लागि समीक्षा र सिफारिसहरू
"Singlon": प्रयोगको लागि निर्देशन। समीक्षा, मूल्य संकेत
Mila Kunis: Filmography। Mila Kunis राम्रो फिल्म। अभिनेत्री को जीवनी
Hyperplastic gastritis - यो के हो?
आफ्नै बनाउन A4 खाम एक पाना रूपमा
आत्मालाई कसरी सुरक्षित तुल्याउँदछ?
होन्डा सीबीआर 1000 - नयाँ पुस्ता खेल मोटरसाइकल
7 दिन चकलेट आहार: परिणाम, मेनु, समीक्षा
भियतनाम, होटल Vinh Suong समुद्री किनारा3*: विवरण, सेवा, फोटो र पर्यटकहरु को समीक्षा
संगठन को प्रतिस्पर्धी लाभ
लागि महिला योग